Teratany · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Teratany · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Teratany tamin'ny Novambra, 2012
Tao amin'ny The Engine Room no nalefa voalohany ity lahatsoratra ity. Niroborobo ny toekarena tao Però noho ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany nahazoana dolara amina miliara. Raha nanomboka tetikasa vaovao ireo mpitrandraka sy mpandavaka, inona ny fiantraikan'izany amin'ireo vahoaka izay monina akaikin'izy ireo? Ny olana iray ohatra dia ny loharano voaloto izay mitarika aretina sy fahafatesana....
Azia Afovoany sy Kaokazy 14 Novambra 2012
Na dia heloka aza ny fakàna vady an-keriny ao Kyrgyzstan, dia mbola betsaka ireo lehilahy manohy maka an-keriny ireo tovovavy iriany ho vady. Vao tsy ela akory izay,namoaka lalàna ireo parlemantera tao Kyrgyz noho ny tery vay manta nataon'ireo fikambanam-behivavy. Ary ankehitriny ny fakàna an-keriny tovovavy sy ny fanerena azy ireo hanambady dia heloka be vava mitovy amin'ny halatra ondry iray ihany koa .
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Novambra 2012
Ny alin'ny 14 Martsa 2012, nalain'ny Sampam-pitsikilovana Nasionaly sy ny Sampam-piarovana Sodànezy (NISS) tao amin'ny trano fonenany ilay vehivavy antsoina hoe Jalila Khamis Kuku ary nampidirina am-ponja. Tsy mahazo maka mpisolo vava izy ary tsy mahazo mitondra akanjo hosoloina ihany koa, natosika tao anaty fiara pickup i Jalila izay mbola niaraka tamin'ny akanjo fentina matory ary NISS am-polony manao fanamiana sivily no nanaraka azy tamin'izany.
Afrika Mainty 13 Novambra 2012
Azia Atsinanana 07 Novambra 2012